Kuva blockchain yokuvaka - Blockchain News
Kana uri kurota rakasikwa yako cryptocurrency, kudzidza kunyora vakachenjera zvibvumirano uye blockchain mafomu, asi havanzwisisi zvirongwa, kana kana wanga kutanga kwenguva refu, asi chete vakadzidza pamusoro cryptocurrencies uye vanoda dzidzisazve, zvinokwanisika. Munyaya ino, isu vachakuudza kuti vakazvimiririra kudzidza mubvunzo, ruzivo chii chichava kubatsira uye kuti papi.
Rudzii chawo runodikanwa blockchain kukura?
Kana tiri kutaura pamusoro pokumuka akangwara zvibvumirano pane zvimwe platforms, semuyenzaniso, Ethereum, ipapo “hwaro” harudikanwi. Unofanira chete kukwanisa kushandisa kutsvaka injini uye zvishoma. pachavo, akangwara zvibvumirano vakanga pamuviri chaizvo kuitira kuti asike nevanhu vasiri kunyanya kujairana Coding. The chete chinetso angamuka ndiyo kushaya nokudzidziswa zvinhu, nekuti zvemichina ichi mudiki chaizvo.
Kana tiri kutaura pamusoro pokumuka edu blockchain, ipapo chakakomba nechimwe unodiwa. Asi chete nayo haingatikwaniri.
ruzivo chii kunokosha kutenga
The chikuru ndechokuti kunzwisisa sei unyanzvi mabasa. Vazhinji zvausingakwanisi mu blockchain kukura vari chokuita peculiarities ari zvigadzirwa, izvo haabvumiri kushandisa zvimwe fungidziro mapatani. With ichi, matambudziko okutanga dzinomuka panguva kunyudza pachikuva zvinofambidzana. zvisinei, mushure une kunzwisisa zvigadzirwa zvawo, matambudziko kuti mukudzidzire imwe zvirongwa mumitauro kunyora akangwara zvibvumirano haangazodzingi simuka. Pamusoro pe, Ndingadai vanokurudzira kunyatsoongorora kuverenga White Paper of cryptocurrency, pahwaro yauri kuenda kunyora vakachenjera zvibvumirano.
Zvinoita kudzidza vakazvimiririra kana nani kutora chaidzo kosi?
Ehe saizvozvo, ruzivo chero zvino zvinogona kutengwa vakazvimiririra, Kanenge nekuti vazhinji zvirongwa aisa panze pamusoro GitHub. The chikuru dambudziko iri kumhanya yokuwana zivo. Kune rumwe rutivi, pane zvakawanda pamusoro blockchain, asi zviri kudzika chaizvo, saka nguva ruchapinda kuti inonzwika apo humboo. Pane rimwe divi, pane ngozi kuti iwe chete kudzokorora zvose zvakaitwa mudzidzisi, kutevedzera zvose bumbiro remitemo kubva mubhuku, asi hauzonwi kudzidza chinhu. saka, Ndingadai dzinorumbidza kutora kosi apo unogona kukurumidza kuwana zivo inokosha uye zvakafanana tichiita kuzvidzora kudzidza, semuyenzaniso, kumisa chinangwa – kushandisa zvikuru chirongwa.
Chii zvirongwa Mitauro zvinodiwa?
Tinotenda kuti chinoita njere kusiyanisa zvirongwa mitauro nokuda mwero inobatsira kuti kudzidza chinhu chitsva. A mutauro zvirongwa chete chombo kuti zvakakodzera zvimwe zviitiko.
Mumapoka makuru kubva nesilicon Valley zvavo hapana chinhu akadai yokuvaka rimwe kana mumwe mutauro. Saka kana iwe unogona chirongwa chiri ndinoiitawo guru. Kana uine kunzwisisa sei kuzviita nemazvo, muchiziva dzinokosha yokuvaka mapurani uye fungidziro mapatani ndiyo rakatokura ndinoiitawo.
Useful manyuko nokuda mutsva nyanzvi
Tinoratidza kuti bhuku yokuvaka Andreas M. Antonopoulos. wo, unofanira kuverenga White Paper of cryptocurrency, pahwaro kwaunoenda kukudziridza. Mushure kunzwisisa mabikirwo pachayo, kuenda kuverenga zvinyorwa. Hatidi kuvakurudzira pakarepo kutangira aurayiwe Tutorials chiuru uye mumwe, nekuti nokuda ndechokuti zvemichina mudiki zvakakwana, chete pamutemo mapepa anogona kushanda chete kwakavimbika.
Asi pashure pokudzidza mapepa, unogona kuenda kuita nyore Tutorials. Kana bumbiro remitemo mienzaniso, pane wandei rakazaruka tsime muzvirongwa kuti zviri nyore kuwana musi GitHub.
Uyewo kune munharaunda nokuda Developers, teregiramu dzevakurukuri, paIndaneti mapoka, mapoka LinkedIn uye zvichingodaro, saka hapafaniri kuva nezvinetso kutsvaka vemunharaunda.
Kuva blockchain yokuvaka?
Revolut, wezvemari ...
Bittrex achabvumira ini ...
Yahoo inosanganisira BTC t ...
Previous Post:Blockchain News 30 Ndira 2018
Next Post:Blockchain News 31 Ndira 2018